SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 23aad. Sheekadii gabadhii meydkeeda la helay. – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 23aad. Sheekadii gabadhii meydkeeda la helay.
January 2, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Waxay qeybtii hore noo mareysay markii uu khaliifkii aad uga xanaaqay in waziirka uusan u keenin qofkii dilay gabadhii.
Markii dadkii isku yimaadeen oo isku soo baxeen ayaa waxaa dhacday in uu madashii yimid wiil dhalin yaro ah wuxuuna soo kor istaagay jacfar asigoo kudhahay waziirow waxaan rabaaa inaad khaliifka iigeyso waxaan ahay qofkii gabadha dilay.
Lkn waxyar kadib waxaa meesha yimid oday aad u da,weyn wuxuu asna soo kor istaagay jacfar wuxuuna kudhahay wiilkaan hadalkiisa ha aaminin gabadhana anigaa dilay ee aniga iigeey khaliifka.
Markaas ayuu wiilkii dhahay odaygaa waa oday aad uweyn wuxuu sheegaayana kama war haayo gabadhana anigaa dilay ee hala iigeeyo aniga khaliifka.
Jacfar arinta ayuu aad ula yaabay wuxuuna labadoodii ugeeyay khaliifkii si lookala saaro qofka gabadha dilay, markii dambe waxaa cadaaadatay inuu wiilka dilay gabdha,
Kadib khaliifkii ayaa weydiiyay sababta??
Wuxuu wiilkii ku jawaabay “khaliifow gabadhaan waxay aheyd xaaskeyga waxaana dhalay odaygaan ila socdo oo adeer ii ah, waxay iidhashay sadax cunug,
Mudo kadib gabadhii wey iga xanuunsanatay waxayna iga codsatay inaan ukeeno xabad tufaax ah anigana waan soo baxay oo waxaan imid suuqii anigoo maalintaas dhan hal xabo tufaax raadinyay ayaan markii dambe lakulmay oday tufaaxa iibin jiray. Wuxuu iisheegay in tufaax la waayay oo aan magaaladan hada ka heleynin lkn hadii aan magaalada basra aado kasoo heli doono.
Khaliifow waxaan usoo safray magaalada basra waxaana kasoo iibsaday sadax tufaax, balse markii aan xaaskeyga ukeenay wey diiday iney cunto.
Maalintii xigtay shaqadeyda ayaan iska imid anigoo tukaankeyga agfadhiyo ayaa waxaa isoo agmaray mid adoon ahaa oo tufaax gacanta ku haayo.
Waxaan weydiiyay xagee tufaaxaan kasoo iibsatay ileen magalaada dhan aniga tufaax waan ka waayee?
Wuxuu iigu jawaabay tufaaxaan waxaan kasoo qaatay xabiibteyda waxayna iisheegtay in ninkeeda uu tufaaxaan dartiisa uga safray magaalada basra.
Markii uu hadalkaas idhahay ayaan aad u murogooday dunidiina ila madoobaatay, dhaqso ayaan tukaankii kusoo xirtay waxaana soo aaday gurigii markii aan imid ayaan weydiiyay naagteydii aaway tufaaxyadii??
Waxay iisoo bixisay labo tufaax markaas ayaan kudhahay aaway kii sadaxaad? Waxayna iigu jawaabtay ma aqaano.
Markaas ayaan ogaaday in warkii uu ninka adoonka ahaa iisheegay uu run ahaa ciil inta iscelin waayay ayaan naagteydii inta xabadka uga fariistay midi lasoo baxay oon gowracay. Waxaana hilbaheedii u googooyay cad cad anigoo ku tuuray wabiga dijla dhexdiisa.
Marka khaliifkii mu,miniintow waxaan kaa codsanayaa inaan ciqaabta ii soo dadadjiso sababtoo ah aniga markii aan gabadhii dilay ayaan waxaan lakulmay wiilkeyga oo oynaya asigoon ka warheynin waxaan hooyadiisa ku sameeyay waan weydiiyay waxa ku dhacay wuxuuna iigu jawaabay in saakay uu hooyadiisa kasoo qaatay halxabo tufaax asigoo jidka lataagan uu adoon madow ka dafay kana xoogay.
Wuxuuna igu dhahay anoo jidka taagan ayuu ii yimid wuxuuna iweydiiyay meesha aan tufaaxa ka keenay waxaana ku dhahay aabahyega ayaa u safray magaalada basra si uu ugu keeno hooyadey oo xanuunsan wuxuuna u keenay sadax xabo.
Anigii markaan warkii wiilkeyga maqlay ayaan shalaayay mareysan shalaay waxba ii tareynin waxaana ii yimid adeerkeyga xaaskeyga aabaheed wixii dhacay ayaana usheegay ee amiiral mu,miniinow waxaan rabaa ciqaabteyda inaad iisoo dadajiso sidii aan ugu dagdagay xaaskeyga ooo aan waxba uhubsan waayay. (HUBSIIMO HAL BAAA LASIISTAA AYAY SOOMAALI TIRI).
Markaas ayay shahra-zaad ogaatay in subaxii la gaaray waxayna ka aamustay hadalkii u banaanaa.
Habeenkii xigay markii lagaaray shahra-zaad waxay hadalka ku bilowday:
Boqorow khaliifkii hadalkaas markuu maqlay wuxuu ku dhaartay inuusan dili dooni waxaan adoonkaas xun aheyn.
Markaas ayuu soo eegay dhankii Jacfar wuxuuna ku dhahay “ii keen adoonkaas xun hadii aadan ii keenin allaah ayaan ku dhaartee inaan adiga qoorta kaa jari doono”.
Markaas ayuu Jacfar inta gurigiisa iska tagay markale oohin iska bilaabay asigoo leh “xageen ka keenaa adoonkaas aan xitaa aqoonin cid taqaanana aysan jirin?
Wallahi inaanan far dhaqaajineynin waxaana wakiishtay allihii toogtii hore ibad-baadiyay inuu hadana ibad-baadin doono”
Jacfar wuxuu iska fariistay gurigiisa markii ay kasoo wareegatay sadax maalmood oo waqtigii loo qabtayna dhamaaday ayaa waxaa u yimid ciidankii Amiirka waxayna dhaheen amiirka Mu,miniinta ayaa kuu yeerayo asigoo aad u xanaaqsan.
Jacfar hadalkii ciidanka markuu maqlay ayuu iska sii ooyay wuxuuna u jeestay dhankii qoyskiisa si uu u sagootiyo, waxaana qoyskiisa ku jirtay gabadhiisa yaraanta aheyd oo uu aad u jeclaa hab ayuu siiyay wuuna isku duubay.
Lkn wuxuu dareemay wax kuusan oo jeebkeeda ku jiro markaas ayuu weydiiyay “Gabadheydiiyey waa maxay waxaan jeebka kuugu jira?”
Waxay ugu jawaabtay “Aabo waa tufaax uu keenay adoonkeena Reexaan waxaana uga iibsaday labo diinaar si aan ugu ciyaaro”
Jacfar markuu hadalkaas maqlay ayuu aad u farxay asigoo alle u mahad celiyay farxadna la ooyay, kadibna wuxuu u wacay adoonkii wuxuuna weydiiyay xagee ka keentay tufaaxaan (waxaa laga yaabaa in uusan aheyn adoonkii ay raadinayeen jacfarna ma uusan rabin inuu u dag-dago siduu willkii naagtiisa qalay u dagdagay”
Adoonkii ayaa markaas ku jawaabay “sayidkeygow mudo laga joogo 5 maalmood kahor anoo jid maraayo ayaan waxaan ka qaaday wiil yar oo jidka ku ciyaarayo markaan weydiiyay halkuu ka keenayna wuxuu iigu jawaabay “hooyadey oo xanuunsan ayaa aabaheyga uga keenay magaalada basra 3xabo tufaax ah anigana midaan ayaan sooo qaatay” markaas ayaan wiilkii garaacay tufaaxiina ka xoogay.
Markuu jacfar hadalkaas maqlay ayuu amar ku bixiyay in adoonka la xiro loona geeyo Haaruun Al-rashiid amiirka mu,miniinta, sidii ayaana loogu geeyay adoonkii kuna badbaaday Waziir Jacfar
Markaas ayuu haaruun al-rashiid la yaabay qisada meesha ka dhacday wuxuuna amray in la diiwaan galiyo qisadaan cajiibka si jiilka dambe ugu cibro qaataan.
Markaas ayuu jacfar dhahay amiirkeenow hadii aad maqli laheyd qisadii Nimankii weershaha, kabo tolihii, yahuudigii, kirishtaankii iyo muslimkii ka dhexdhacday sheekadaan lama yaabteen.
Markaas ayuu dhahay Haaruun Al-rashiid bal inoo sheeg sheekada ka yaab badan midaan naga yaabisay.
Markaas ayuu Wazir Jacfar dhahay wlhi inaanan kaaga sheekeynin ilaa aad ka cafiso adoonkeyga oo aad dhiigiisa iiga hibeyneyso.
Markaas ayuu khaliifkii dhahay hadiiba qisada aad soo wado mida aan hada ujeedo ka yaab badantahay waan kuu hibeeyay dhiigiisa ee bal sheeg qisada.
Waziir Jacfar wuxuu hadalkiisa ku bilaabay :
La soco qeybta 24aad oo xiiso leh.
W.T. Cabdiraxmaan Anteeno
Waxaa Aqrisay 1,029